Wednesday May 18, 2022 - 21:31:43
Laga soo bilaabo xilligaas illaa maanta waxa sannadkasta maamulku xusaa sannad guurada ka soo wareegtay maalintaas.
‘Somaliland’ ayaan illaa hadda helin aqoonsi caalami ah kaas oo ay baadi goobayeen muddooyin badan.
Maanta oo ay ku beegnayd 18 May, 2022 waxa ka hadlay munaasibaddan Muuse Biixi oo ah madaxweynaha ‘Somaliland’ ayaa ka sheekeeyay waayihii la soo marey illaa burburkii isaga oo sheegay in Koonfurtu aanay marnaba wax garawshiyo ah siinnin waqooyiga.
Waxa kale oo uu sheegay in markii Xamar la tagey ay koonfurtu qaadatey madaxweynihii, Raysal wasaarihii iyo taliyeyaashii labada ciidan ee Millateriga iyo Bilayska. Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa la filayaa in xidhiidhkoodu sidii hore ka wanaagsanaado maaddaama xilligii Farmaajo uu xidhiidhkoodu aad u xumaaday.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo iyo maamulka Somaliland ayaa xidhiidhkoodu aad u xumaa, taas oo sababteedu ahayd ka dib markii Farmaajo isku dayay in uu Soomaaliya ka dhigo mid looga taliyo meel kaliya. Isku daygaas Farmaajo oo lagu tilmaami karo in uu xoogaha ka qab roonaa siyaasiyiinta kale ee dhiggiisa ah walow isba uu daba dhilif shisheeye ahaa.
Xasan Sheekh iyo Shariif ayaa ahaa madaxweynayaashii ugu debecsanaa Somaliland tan iyo intii burburka.
Waxaa qoray Wadaadyare Xaashi